トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Life Card wokurarama chikwereti | akadai chimbadzo basa kukarukureta, basa mashoko
In wokurarama zvikwereti upenyu kadhi, unogona kusarudza pamwedzi mutsividzo urongwa kubva mitatu yamabwe. Sarudza chemhosva urongwa kubva "Yen 3000, 4,000 Yen uye 5,000 Yen" panguva chikumbiro, zvinokwanisika kuti pachena kuisa uye dzakachinjwa mune akafanana nguva.
Mukuwedzera, Upenyu Card rave akawedzera basa rinonzi "ribonucleic gare gare". Mubasa iri, kunyange kana iwe tsanangurai bundu Nemutengo kana Yakabudiswa muchitoro, unogona kuchinja mu wokurarama chikwereti gare gare. Sezvo inivhoyisi anogona kushandiswa chero paakasvika ruoko, unogona kushandura chemhosva urongwa maererano nemhuri zvinhu panguva iyoyo.
Zvisinei, nokuti nguva muganhu inopiwa kushandura, ngatiitei kungwarira. Change nzira dzinogona kuitwa paIndaneti.
Uyezve, kuchinja wokurarama mbiri upenyu kadhi anosarudzwa, kuvapowo basa rinonzi "AUTO ribonucleic". Ko basa kuti kushanda vose kutenga caching, kunyange kana ukasarudza bundu pachiyero, mu Yakabudiswa pamusoro pakaunda, uchava kutaura zviri wokurarama chikwereti. Kana ukashandisa wokurarama chikwereti kuna
upenyu kadhi wokurarama chikwereti chimbadzo basa
Life Card pamusoro, zvichava kutora chimbadzo basa "nouchapupu mwero 15,0 muzana gore negore." The chaiyo zvazvingava wegore negore, ndiye chimbadzo vakadaro chimbadzo yechikoro kana achidzorerwezve kwenhambo kupedza imwe gore. Naizvozvo, kana uchida abhadhare panguva kana mwedzi mitanhatu, chichava kukarukureta kuuya zvinotora chimbadzo basa "7.5 muzana", iro anoenderana hafu 15 muzana.
Somuenzaniso, kana uchida kudzorera mumwedzi mitanhatu uye kunotenga pamusoro 500,000 Yen, pedyo "500,000 Yen × 7.5% = 37.500 Yen", pa 6 mwedzi 7, Zvinotora chimbadzo kubhadhara 500 Yen.
Reference | iri wokurarama chikwereti kuti wokurarama zvikwereti zvavo kufarira (komisheni), kufarira prices
upenyu kadhi wokurarama chikwereti mutsividzo zano
upenyu kadhi iri "nepakati yemasiraidhi huru uye mubereko twasu-mutsetse wokurarama nzira" rave vakagamuchirwa . Muchidimbu, ichi ndicho hurongwa kuramba Vaiisa (change) zvichienderana nechiyero pamwedzi pamari yezvikwereti iri kubhadharwa.
kana kushandiswa iri guru Nechiyero anova yakakura pamari yezvikwereti iri kubhadharwa romwedzi, pachiyero zvichava zvishoma pamari yezvikwereti iri kubhadharwa uye ipfupi. Ukuwo pane nyore kushandisa makomborero, nokuti mubhadharo ari kufarira mugove ndiwo muripo zano iri panzvimbo yokutanga, pane payakaipira akadai wechikoro hazvingaiti kutapudzwa.
Mukuwedzera, muna Life Card, izvo zvakapa chemhosva simulation kukona wokurarama mbiri paIndaneti, nokungoita kupinda kushandisa mari iri pakona iyi, unogona kugadzira pamwedzi nokuripira urongwa. Kana uchida kuti uwane kuzopiwawo plan, unogona kuedza nokushingaira kushandisa.
bhuku | mhando muripo nzira wokurarama chikwereti